Malunga nathi -Sichuan Junling Technology Co., Ltd
Imbuyekezo Sichuan Junling Technology Co., Ltd.
Phambi kokwazisa inkampani yethu, kufuneka ndazise indawo apho inkampani yethu yasekwa khona-uChengdu. Njengoko kusaziwa, i-Chengdu inesiseko esikhulu esidumileyo se-panda ex-situ yolondolozo, uphando lwezenzululwazi kunye nesiseko sokuzalela-i-Chengdu Giant Panda Breeding Research Base, esebenza njenge "Giant Panda Ex-situ Conservation Ecological Demonstration Project" ukukhusela nokuzala isigebenga Iipanda kunye neepanda ezibomvu ezisemngciphekweni wokutshiswa eChina Izilwanyana zasendle zidumile kwihlabathi liphela. Kwangelo xesha, iChengdu ikwangumzi okhathalayo kunye nonyamezelanayo kwizilwanyana zasekhaya eziqhelekileyo.
Siyasikhathalela isilwanyana sakho njengoko usikhathalele
Iindawo zokuthenga kunye neeresityu azibandakanyi izilwanyana zasekhaya
E-Chengdu, ungazithatha izilwanyana zakho ezisesitratweni ngaphandle kokumfamekisa (ewe, into efunekayo kukuba ufuna ukutsala intambo kwaye ube nomhambi wesilwanyana). Iindawo zokutyela ezininzi eChengdu azikuthandi ukuzisa izilwanyana zasekhaya, kodwa zamkele izilwanyana zasekhaya. Kukho nezinye iivenkile ezinezitulo, iipleyiti, amachibi amanzi okusela, njl.
Iikati ezilahlekileyo kunye neenja ezilahlekileyo azisayi kulamba eChengdu
Zininzi iindawo zokuhlala ezindala eChengdu, ezikwenza ukuba izinja neekati ezininzi ezilahlekileyo zivele kwezi ndawo. Kodwa ungakhathazeki malunga nokuba balambile. Abantu abaninzi ekuhlaleni baya kubondla. Ngenxa yoko, ezi cuties zincinci azoyiki abantu ongabaziyo kunye nokuncamathela. Abantu ababalahli. Nangona abanye abantu besithi bangcolile kwaye baphethe iibhaktheriya, uninzi lwabantu lusabonisa isimo sokwamkela kubo.
Kukho amakhulu eendlela zokuthanda izilwanyana ezincinci eChengdu
Unonophelo kunye nokunyamezelana kwezilwanyana zasekhaya kukaChengdu kukwabonakaliswa kuzo zonke iinkalo. Umzekelo, ezinye iindawo ziye zakha iipaki zezilwanyana zasekhaya, amakhulu ezibhedlele zezilwanyana zasekhaya, iziboniso zezilwanyana zasekhaya, iipaki ezininzi zezilwanyana zasekhaya, iivenkile zekofu zekati ... konke kwenza abantu bazive ngathi ukugcina izilwanyana eChengdu kuyinto eyonwabisayo. .
Ngokusekwe kule meko kunye nenkcubeko, iSichuan Junling Technology Co., Ltd., inkampani yemveliso yezilwanyana eseChengdu, ewe, iya kunika ingqalelo ngakumbi kwintuthuzelo yezilwanyana zasekhaya kunye nokunceda kwabanini bezilwanyana kuphando lwemveliso kunye nophuhliso, kwaye izame ukwenza abanini bezilwanyana zasekhaya kwaye izilwanyana zifumana indlela engcono yokuphila kunye, le ikwayinjongo yoqobo yenkampani yethu.